Azia Atsinanana27 Oktobra 2015
Azia Atsimo27 Oktobra 2015
Ao amin'ny farihy antsoina hoe Bellandur no tena miforona ireo roatra ao Bangalore, India, farihy izay hatry ny ela no efa ivarinan'ireo rano maloto sy loto simika tsy nisy fikarakaràna sahaza akory.
Tantaran-Jazavavy Etiôpiana Nanohitra Ny Fakàna An-keriny, Sy Ny An'ireo Mpisolovava Nanavotra Ny Fiainany
Midika hoe "fahasahiana" ny "Difret" amin'ny fiteny Amharic. Sarimihetsika iray mitondra io anarana io no mitantara ny tantaran-jazavavy Etiôpiana iray izay nalainà lehilahy an-keriny mba hoterena hanaraka ny "fanambadiana" araka ny fomban-drazana.
‘Nilaza tantara mivelatra kokoa amin'ny firenenay ny nanagadrana anay': Eritreritra avy amin'ireo bilaogeran'ny Zone9 ao Ethiopia
Etiopia27 Oktobra 2015
"Ho an'ireo nanagadra anay izay nanome anay ireny fitsapana ireny, na tsy mangataka famelan-keloka aminay aza ianareo, indreto izahay."
Niteraka Tanàna Haolo ao Meksika Ny Varotra Rongony sy Ny Ady Amin'ny Fikambanan-jiolahy
Meksika27 Oktobra 2015
Nahatonga ireo olona marobe voatery nifindra monina nandao ny tanindrazan'izy ireo ny fikambanan-jiolahy tao Meksika sy ny herisetra tamin'izany, ka lasa "tanàna haolo" ankehitriny ny toerana.
Horohorontany Mahafaty Nanana Hery 7.5 Nampihovitra An'i Azia Atsimo
Manodidina ny 180 ireo olona notaterina hoe maty tany amin'ny faritra.
Mahatonga fanontaniana maro ao Bangladesh ny fanafihana tamin'ny baomba ny fivorian'ny Shiita tao Dhaka
Azia Atsimo26 Oktobra 2015
Voatatitra fa nilaza tena ho tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana tamin'ny alalan'ny baomba tao Hussaini Dalan, izay nahafatesana olona iray sy naharatrana olona maherin'ny enimpolo ny Fanjakana Islamika.
Kanadiana aloha: Mpifindramonina Somali iray nahazo toerana tao amin'ny Parlemanta
Afrika Mainty25 Oktobra 2015
Mpifindramonina tafiditra ao amin'ny vohitry ny Parlemanta: Ahmed Hussen no Kanadiana voalohany manana fiaviana Somali tafiditra ao amin'ny Parlemantan'i Canada.
​Toe-javatra Manjavozavo Manodidina Ny Kabary Momba ny Zava-kanto Nataon'ny Filohan'i Shina, Xi
Azia Atsinanana25 Oktobra 2015
"Nilaza ny marina i Wang Shiwei ary novonoina. Ka lasa nironana ny filazana lainga. Ankehitriny, soloin'ny lainga toerana ny zavatra hafa rehetra."